Isikhala seso ukugelelza umshini T-937M
Isikhala seso ukugelelza umshini T-962C
Manual stencil Iphrinta
Lo mshini nge ingxenye infrared ukunikeza off ukushisa okuyinto ukuhlola ezimele, antjintje eziphambili PID lokushisa ezihlakaniphile, zokulawula izinga lokushisa ngokunembile.
Ukushisa infrared kungekho babe ukugeleza sirocco. Musa nomthelela ipherimitha ingxenye. Can efanelekayo yonke ingxenye, ikakhulukazi Micro BGA ingxenye.
BGA Irda Oshiselelayo T-835
Hlakulela ngesandla isibani isakhiwo nge operation nezimo nokulawula lula. T835 kufanelekile yimuphi amaphuzu sezakhi flat, ikakhulukazi BGA, SMD izingxenye.
Ukushisa infrared kungekho babe ukugeleza sirocco. Musa nomthelela ipherimitha encane component.Can efanelekayo yonke ingxenye, ikakhulukazi Micro BGA ingxenye.
Nakanjani onganelisa ikhompyutha, notebook, le aphinde abhukude abuyele ugesi nokunye le BGA uphawu off / ukulungiswa isicelo; Ngokukhethekile ikakhulukazi amasudi kuya enyakatho computer futhi eningizimu ibhuloho.
I ukhetha umshini lo lefoni ingxenye ngempumelelo kakhulu zikhipha izinhlayiyana ukushisa okuyinto ukuhlola ezimele, zamukele PID eziphambili ezihlakaniphile elilawulayo efudumele ugesi technology, Izilawuli kulungele ngokunembile.
Zezıhlabane Plate T-946
Antjintje MCU futhi PID eziphambili lokushisa ezihlakaniphile ukulawula Ukushisa ubuchwepheshe & eziphambili lokushisa sikalo technology, ukwakheka lokushisa ngqo.
Lo mshini has ukukhethwa eqinile futhi ephelele umsebenzi, nabanye abayisishiyagalombili amagagasi lokushisa kule software inkumbulo, ungakhetha ilungelo lokushisa wave ngokuvumelana solder / unsolder isicelo.
Small ukugelelza umshini , Lead Mahhala ukugelelza umshini , okuzenzakalelayo Hola Mahhala ukugelelza umshini , SMT ukugelelza umshini , nokunamathisela ngomthofu Machine , seso ukugelelza umshini ,